रोचक Archives - Onlines Time
Jan222022 by puspaNo Comments
हामीलाई सधै एउटा प्रश्नले घेरा हालिरहेको हुन्छ,कसरी सफल हुने ? कसरी प्रगति गर्ने ?’ वास्तवमा कुनैपनि कर्ममा सफलता हासिल गर्नका लागि शारीरिक र मानसिक लगाव, सक्रियता, दृढता, आत्माविश्वास आवश्यक हुन्छ । सही ढंगले तय गरिएको योजनालाई उत्तिकै कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेर हामी प्रगतिपथमा लम्कन सक्छौं । अतः यसका लागि हामीसँग उर्जावान्, सक्रिय र तन्दुरुस्त शरीर मात्र होइन, तिक्ष्ण बुद्धी पनि आवश्याक हुन्छ । कुनैपनि निणर्य सही समयमा, सही ढंगले लिनका लागि हामीमा त्यही किसिमको बुद्धि चाहिन्छ । र, बुद्धिको सोझो कनेक्सन दिमागसँग हुन्छ । अब अर्को प्रश्न, दिमाग चाहि कसरी तगडा बनाउने ? यस सन्दर्भमा हिन्दी विविसीको अनलाइन संस्करणमा एउटा लेख प्रकासित छ, जसलाई हामीले यहाँ पेश गरेका छौं । तपाईलाई कहिल्यै यस्तो भएको छ कि, तपाईं कुनै ठाउँ वा व्यक्तिको नाम स्मरण गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ, तर जति गरेपनि त्यो या...
Jan172022 by puspaNo Comments
ख्याल गर्नुहोस बाटोमा हिँड्दा भेटिने यी सात वस्तुबाट सँधै जोगिनुहोस्…
बाटोमा हिँड्दा भेटिने यी सात वस्तुबाट सँधै जोगिनुहोस्…. हामी घरबाट कतै हिड्ने क्रममा कहिले काहिँ बाटाेमा भेटिने वस्तुहरुमध्ये केही शुभ हुन्छन् भने केही अशुभ पनि हुन्छन् । धर्मशास्त्रअनुसार हामीले यस्ता अपवित्र चिजहरुबाट बँचेर हिड्नु पर्छ । यदी बाटोमा हिँड्दा भूल बश यस्ता चिज छोएमा नुहाएर मात्रै अरु काम गर्नु पर्छ। यसको ख्याल नगरी त्यस्ता चिजहरु छुनाले धेरै प्रकारका दोषहरुले हाम्रो जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छन् । यस्ता अपवित्र सात चिज छन्, जोबाट सँधै जोगिएर हिँड्नु पर्छ । १. तान्त्रिक विधिबाट मन्साइएका वस्तुहरु नराम्रो नजर उतार्नको लागि या नराम्रो शक्तिबाट छुटाउन तन्त्रमन्त्र गरिन्छ । यसमा धेरै चिजका उपयोग पनि गरिन्छ र अन्तिममा यी चिजहरुलाई सडकमा वा चौबाटोमा मन्साइन्छ । जस्तै खुर्सानी, कागती, अन्डा, फर्सी, सिंदूर आदि । यदी बाटोमा हिँड्दा यस्ता कुराहरु देखेमा यसबाट बचेर हिड्नुप...
Jan152022 by puspaNo Comments
स्वस्तिमाको आइटम डान्स रहेको साउथ चलचित्र ‘थिरिमाली’ को ट्रेलर सार्वजनिक
साउथ (मलयालम) चलचित्र ‘थिरिमाली’ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । नेपालमा छायांकन भएको चलचित्रको ट्रेलरमा नेपाली अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का र कलाकार माओत्से गुरुङलाई देख्न सकिन्छ । ट्रेलरमा स्वस्तिमाको आइटम डान्स समावेश छ । राजीव सेट्टीको निर्देशनमा तयार भएको चलचित्रमा विपिन जर्ज र धर्माजन बोलगाटी छन् । चलचित्रमा नेपालका रमणीय दृश्य हेर्न सकिन्छ । नेपाल घुम्न आएका दुई व्यक्तिको कथामा यो चलचित्र घुमेको जनाइएको छ । यो पनि पढनुहोस्। नेपाली दर्शकले फिल्म हेर्न जाने बाटो नै भुलेको जस्तो भान भएको थियो । अबको प्राथमिकतामा हल नपर्ने हो कि भनेर हल ब्यवसायी पनि डराएका थिए । यो कुरालाई अन्तराष्ट्रिय फिल्महरुले तोड्ने काम गरे । फेरि अर्को डर पलायो, कतै अन्तराष्ट्रिय फिल्महरुले नेपालली हलमा हस्तक्षेप त गर्ने हैनन्?कतिपय निर्माता निर्देशकले नेपाली फिल्ममा कोटा प्रणाली लागु गर्नुपर्ने सम्मका कु...
Jan112022 by puspaNo Comments
के टिकटकमा लाइभ बस्नेबित्तिकै पैसा कमाइन्छ? टिकटकले बढाउँदैछ, भिखारी र सेलिब्रेटी !
नेपालमा लाखौँ मानिसले टिकटक प्रयोग गरिरहेका छन् । यसको प्रयोगकर्ता दैनिक बढिरहेका छन् । नेता, कलाकार, पत्रकार, युवा सबै टिकटकमा झुमिरहेका छन् । सन् २०१६ देखि चीनबाट सुरु भएको टिकटकले अहिले घरघरमै कलाकार उत्पादन गर्न थालेका छ! सुरूमा यसलाई सबैले मनोरञ्जनका रुपमा लिन्थे । तर, अहिले यो आयआर्जनको स्रोत बन्न पुगेको छ । पाँच मिनेटसम्मको भिडियो बनाएर अपलोड गर्न मिल्ने यसमा गीत र संवादमा अभिनयसमेत गर्न सकिन्छ । सुरूमा यसमा १५ सेकेन्डको मात्रै भिडियो बनाउन मिल्थ्यो। लोकप्रियता बढेसँगै फिचरहरू थपिँदै गए । अहिले पाँच मिनेटसम्मको भिडियो बनाउन सकिन्छ । त्यसैगरी अहिले लाइभ बस्ने सुविधासमेत छ । निश्चित संख्यामा फ्लोआर भएपछि प्रयोकर्ता टिकटकमा लाइभ बस्ने र गेम खेल्ने सुविधा छ । लाइभ बस्नेलाई अरु प्रयोगकर्ताले गिफ्ट दिन मिल्छ । लाइभका बेला अरू प्रयोकर्ताले दिएको गिफ्ट अन्ततः डलरमा रूपान्तरण गर्न मि...
Jan92022 by puspaNo Comments
मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले लगाइन् राउटे युवती गाजलुसँग मित
पूर्वी सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका–४ स्थित भेरी नदी किनारको कालीखोलामा बस्दै आएका राउटे समुदायको बस्तीमा शुक्रबार छुट्टै चहलपहल थियो। अरु बेला भन्दा बस्ती केही सफा थियो। राउटे युवाहरु सिमलको रुख ढा, लेर काठका भाँडावर्तन बनाउँदै थिए । राउटे युवती गाजलु, लोकेन्द्र र प्रकाशको घर अझ सफा थियो।केही बेरमै सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको टोली राउटे बस्ती आइपुग्यो। राउटे समुदायका लागि घर बनाउने विषयमा छलफलका लागि आएकी झाँक्रीले गाजलु र सहरी तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक पद्मकुमार मैनालीले लोकेन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वालाले राउटे युवा प्रकाश शाहीसँग मित लगाउने तयारी थियो। मित लगाउनका लागि मन्त्री झाँक्री र महानिर्देशक मैनालीले काठमाडौंबाट आवश्यक कोशेली ल्याएका थिए। मितलाई दिनका लागि गाजलु, लोकेन्द्र र प्रकाशले पनि काठका भाँडा तयार गरेका थिए।राउटे युवक लो...
Jan72022 by puspaNo Comments
छोरीसँग रमाउँदै गरिमा पन्त , कस्ती भइन् गरिमाकी छोरी ?(हेराैँ तस्बिरहरू)
छोरीसँग रमाउँदै गरिमा पन्त , कस्ती भइन् गरिमाकी छोरी ?(हेराैँ तस्बिरहरू) नेपाली सिने जगतमा नायिकाहरु आमा बन्ने लहर नै चलेको छ । नायिका प्रीयंका कार्की, ऋचा शर्मा, गरिमा पन्त र कलाकार रक्षा श्रेष्ठ आमा बनिसकेका छन् । कोरोना लकडाउन संगै सिने उधोग ठप्प बन्दा फुर्सदिलो बनेका यी अभिनेत्रीहरुलाई आमा बन्ने अवसर जुटेको बुझ्न सकिन्छ । आमाको अनुभुती लिन तयार रहदै गरेकी मध्ये प्रीयंका कार्कीको निकै चर्चा, आलोचना भएपनि अन्यको भने खासै चर्चा भएन । बिदेसमा रहने गरिमा पन्तको बेबी बम्पको फोटोहरु सार्वजनिक भएका थिए । फ्यानहरुले राम्रो रेस्पोन्स गरेका थिए । उनी श्रीमानका साथ बिदेशमा बस्दै अाएकी छन् । पछिल्लो समय उनी छोरीसँगका तस्बिर साझा गरिरहन्छिन् । उनले केहि पहिला कालो पहिरनमा बेबिबम्पका तस्बिर खिचेकै पोजमा उनले हाल छोरीसँग तस्बिर खिचेकी छन् । भने त्यसपछि पनि उनले छोरीसँगका तस्बिर शेयर गरिरहेकी...
Dec312021 by puspaNo Comments
३७ वर्षीय पुरुषले छोरा जन्माए, कसरी भयो सम्भव ?
एक पुरुषले छोरालाई जन्म दिएका छन् । अमेरिकाको लस एन्जलस निवासी एक पुरुषले छोरालाई जन्म दिएका हुन् । ट्रान्स्जेन्डर पुरुष बेनेट कास्पर विलियमले एक स्वस्थ बच्चालाई जन्म दिएका हुन् । जानकारी अनुसार ३७ वर्षीय विलियम एक ट्रान्सजेन्डर पुरुष हुन् । करिब ७ वर्षअघिसम्म महिला रहेका विलियमले सर्जरीमार्फत ब्रेस्ट हटाए र अन्य ट्रिटमेन्टमार्फत विलियमले पुरुषमा हुने हर्मोनहरु परिवर्तन गराएका थिए । तर, मातृसुख लिन चाहेका विलियमले लिंग भने परिवर्तन गराएका थिएनन् । उनै ट्रान्सजेन्डर पुरुष विलियमले सन् २०१७ मा मलिक नामक पुरुषसँग प्रेम सम्बन्धमा गाँसिए । लामो समयसम्म लिभिङ रिलेसनमा बसेको सो दम्पतीले सन्तान जन्माउने फैसला गरेको बताइएको छ । सो फैसलापछि विलियमले सन् २०२० अक्टोबरमा छोरालाई जन्म दिएको समाचार डेलिमेलमा छ । उनले आफ्ना छोराको नाम हडसन राखेका छन् । विलियमले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत नर...
Dec292021 by puspaNo Comments
कहिले शिलाजित सेवन गर्नु भएको छ ? थाहा पाउनुहोस् शिलाजितका चमत्कारी औषधीय गुणको बारेमा
नेपालका पहाडहरूमा पाइने जडीबुटीमा शिलाजीतको विशिष्ट स्थान छ आयुर्वेदमा शिलाजीतको खुब प्रशंसा गरिएको छ र यसलाई जडीबुटीहरूको राजा मानिएको छ । बलपुष्टिकारक, ओजवर्धक, दौर्बल्यनाशक र पौष्टिक गुण शिलाजीतमा पाइन्छ । रोगीको रोग हटाउनका लागि मात्र नभई स्वस्थ व्यक्तिका लागि पनि शिलाजीतको बडो महत्व छ । यौन दौर्बल्य अर्थात् नपुंसकताबाट पीडित विवाहित व्यक्तिले मात्र नभई अविवाहित युवकले पनि यसको सेवन गर्दा लाभ पाउँछ ।विशेषगरी मधुमेह, धातुक्षीणता, बहुमूत्र, स्वप्नदोष, शारीरक दुर्बलता लगायतका रोगहरू यसले निर्मूल बनाइदिन्छ । उचित समयमा उचित योगका साथ विधिपूर्वक शिलाजीतको प्रयोग गर्दा असाध्य मानिएका रोग पनि नष्ट हुन्छन् । शुद्ध शिलाजीत १० ग्राम, केशर दुई ग्राम, अम्बर दुई ग्राम मिसाएर मजाले घोटेर दुई दुई रत्तीको गोली बनाउनुस् । यसलाई बिहान बेलुका दूधसँग खानुस् । स्वप्नदोष आउन बन्द हुन्छ अनि शरीरमा बल ...
नेपाली गाँजाको झोला यूरोपमा बेच्ने गणेश दाईको कथा: यसरी बन्छ गाँजाकै जूत्ता देखि लुगासम्म | Hemp Bag
नेपाली गाँजाको झोला यूरोपमा बेच्ने गणेश दाईको कथा: यसरी बन्छ गाँजाकै जूत्ता देखि लुगासम्म | Hemp Bag यो पनि पढनुहोस्। नेपालका पहाडहरूमा पाइने जडीबुटीमा शिलाजीतको विशिष्ट स्थान छ । आयुर्वेदमा शिलाजीतको खुब प्रशंसा गरिएको छ र यसलाई जडीबुटीहरूको राजा मानिएको छ । बलपुष्टिकारक, ओजवर्धक, दौर्बल्यनाशक र पौष्टिक गुण शिलाजीतमा पाइन्छ । रोगीको रोग हटाउनका लागि मात्र नभई स्वस्थ व्यक्तिका लागि पनि शिलाजीतको बडो महत्व छ । यौन दौर्बल्य अर्थात् नपुंसकताबाट पीडित विवाहित व्यक्तिले मात्र नभई अविवाहित युवकले पनि यसको सेवन गर्दा लाभ पाउँछ ।विशेषगरी मधुमेह, धातुक्षीणता, बहुमूत्र, स्वप्नदोष, शारीरक दुर्बलता लगायतका रोगहरू यसले निर्मूल बनाइदिन्छ । उचित समयमा उचित योगका साथ विधिपूर्वक शिलाजीतको प्रयोग गर्दा असाध्य मानिएका रोग पनि नष्ट हुन्छन् । शुद्ध शिलाजीत १० ग्राम, केशर दुई ग्राम, अम्बर दुई ग्रा...
Dec262021 by puspaNo Comments
पैसा तिर्न नसकेर स्टेज बाहिर नै नाचेर भाइरल बनेका संजुको भाइरल नाच
गुल्मी जिल्ला घुवाचिटी भन्ने ठाउँका सन्जु केही समय अघि बाट सामाजिक संजालमा निकै भाइरल बनेका छन । गुल्मीमा भएको एक कार्यक्रम हेर्न पुगेका उनी त्याहा नृत्य हेर्दै गर्दा बजेको गितमा उनी नाचिरहेको देखिन्छ। पछा डीबाट कसैले खिचेको उक्त भिडियो निकै भाइरल बनेको छ अहिले समाजिक संजालमा ।उनले उक्त कार्यक्रममा भाग लिएका भने होइनन । कार्यक्रम हेर्न गएका उनी बाहिर नच्ने क्रममा उनी जस्तै कार्यक्रम हेर्न गएका कसैले पछाडीबाट सन्जुले थाहा नपाउने गरि उक्त भिडियो खिचेका थिए। त्यसरी भाइरल बनेका सन्जु आफू पनि उक्त कार्यक्रममा गएर आयोजकहरुसगँ नृत्य देखाउने बताएको तर पैसा नतिर जान नपाउने भनी आफुलाई जवाफ दिएको बताउँछन । आर्थिक कमजोर भएका सन्जुले पैसा तिर्न त्यहा सकेनन । तर उनको प्रतिभा भने स्टेज बाहिर नै हिट भयो ।स्टेजमा गित बजे पछि आफू बाहिर नाच्दै हेरेको उनले बताए। त्यही बेला कसैले उनको भिडियो खिचेको उनला...